RESTAURANTS’ REVIEW | Food Magazine Myanmar | Page 3
The Brunch Society Restaurant & Bar Food Magazine ရဲ့ လစဉ်ပါဝင်နေကျအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Eating Out ကဏ္ဍအတွက် ဖော်ပြပေးဖို့ ဒီတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်းမီးပွိုင့်နားက မီးသတ်ဌာနဘေး ယခင် Duty Free ဆိုင်ဟောင်းနေရာမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ The ....
RASA LASA (ဒီအရသာလေးလာစား !!!)
RASA LASA (ဒီအရသာလေးလာစား !!!) ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီတစ်လ Eating Out အစီအစဉ်အတွက် မိတ်ဆက်ပေးဖို့ ရောက်သွားတာကတော့ သိမ်ဖြူလမ်းမကြီးပေါ် မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းထောင့်နားလေးက အသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ မလေးရှားစားသောက်ဆိုင်အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးကို အခုစာရေးနေတဲ့ အချိန်ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှ ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုသလို ....
Food Magazine စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်လမှာ Eating Out ကဏ္ဍအတွက် ရွေးချယ်တင်ပြပေးချင်တဲ့ဆိုင်ကတော့ တာမွေ Ocean Center အပေါ်ဆုံးထပ်က Secret Recipe ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်နာမည်ဆန်းဆန်းနဲ့ ဒီဆိုင်လေးက စင်္ကာပူအခြေစိုက် ....
ပရိသတ်ကြီးရေ မိုးတွေဖြိုင်ဖြိုင်ကျတဲ့ ဒီတစ်လမှာ Eating Out အပြင်ထွက်စားစရာ ဆိုင်ကောင်းကောင်း အတွက် ရွေးချယ်တင်ပြပေးချင်တာကတော့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တော်ဝင်လမ်းပေါ် ဝိတိုရိ ယ ဆေးရုံကြီးအရှေ့ဘက်တန်းက အသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ MIX Restaurant ဆိုင်လေးအကြောင်း ....
ပရိသတ်ကြီးရေ Food Magazine သက်တမ်းတစ်လျောက် ရွေးချယ်တင်ပြပေးလာခဲ့တဲ့ စားသောက်ဆိုင်များနဲ့မတူ မြန်မာပြည်အတွက် ပထမဦးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ မြေထဲပင်လယ်ဒေသ အစားအသောက်များနဲ့ တည်ခင်းဝင်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ La Taverna MEDITEPRANEAN BISTRO အကြောင်းလေး ဒီတစ်လ Eating Out ကဏ္ဍမှာ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ ရန်ကုန်အင်တာနေရှင်နယ် ဟိုတယ်ဝင်းထဲက အဖြူရောင်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဆိုင်လေးကို ....